२०१७ च्यालेन्ज, यो बर्ष भित्रै १ लाख सब्स्क्राइबर पुर्याउने – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
नयाँ बर्ष २०१७ मा भिडियो ब्लगिंग लाइ नयाँ उचाइमा पुर्याउने सोच बनाएर सोहि अनुरुप भिडियोहरुलाइ स्तम्भमा बाँड्ने, आँफु र आफ्नो टिम बाहिरका सर्जकहरुको भिडियो पनि अपलोड गर्ने जमर्को गरेको छु । भिडियोबाट कमाइ भएमा त्यो कमाइको बाँड्फाड गर्ने एक सुत्र पनि तयार गरेको छु । भिडियोका तिन पक्ष अडियो, भिडियो र ब्यबस्थापनलाइ शुत्रमा ढालेर प्रतिशतको आधारमा कमाइको बाँड्फाँड गरिनेछ । यो बिभाजनमा पनि आँशिकरुपमा सामेल हुने ब्यक्तिहरुलाइ सोहि अनुरुपको आँशिक बिभाजन गरिनेछ । जस्तो कि, कसैले एनिमेसन बनाएर सहयोग गरेमा एनिमेसको लम्बाइ, मेहनत र दर्शकमा त्यसले पार्ने प्रभावका आधारमा दुबै पक्ष बिच सहमति गरि बांडफाँड गरिनेछ ।
अघिल्लो बर्ष सम्म भै परि आउने समाचार् बिषयलाइ लिएर भिडियो बनाउने गरेको थिए । च्यानलका दर्शकहरु बिच त्यस्तै भिडियोको माग पनि रहिरहेको हुनाले त्यस्ता भिडियोसंगै नियमित स्तम्भ पनि शुरु गरेको छु । भैपरि आउने भिडियो बाहेक प्रत्येक हप्ता कम्तिमा पनि २-४ वटा रेगुलर भिडियो अपलोड गर्ने मेरो योजना छ ।
यसरि नियमित स्तम्भ शुरु गर्दा दर्शकहरुले कहिले कस्तो खालको भिडियो आँउछ भन्नेमा पुर्वानुमान गर्न सक्छन । यसरि नियमित दर्शकहरुको माग पनि पुरा गर्न सजिलो हुने आशा छ ।
नियमित स्तम्भको लागि दर्शकलाइ कुन कुरामा चाख छ भनेर ट्विटरमा गरेको पोल को नतिजा यस प्रकार छ :
यहि नतिजा अन्तरगत पहिलो स्तम्भ “हिजोका कुरा” शुरु गरिसकेको छु । तर, मेरा दर्शकहरुलाइ फिल्म र मनोरन्जन क्षेत्रका कुरामा मात्र चाख दिने हुनाले इतिहासको बारेमा बनाएका भिडियो त्यति मन पराएको भेटिन । तेसैले, पृथ्वि नारायण शाह को बारेमा बनाएको भिडियो मेटाउनु पर्यो ।
यि भिडियो नचलेको हुनाले अन-पब्लिस गर्नु परेको छ :
तेस्तै ओबामा र प्रचण्डको संयोग बारेमा बनाएको भिडियो पनि त्यति चल्न सकेन :
तर, नेपालि सिने क्षेत्रको पहिलो गसिप र स्कुप न्युजको बारेको भिडियोले भने केहि दर्शक पाएको छ । तेसैले, अब नयाँ बन्ने “हिजोका कुरा” सबै मनोरन्जन क्षेत्रका मात्रै हुने छन । सामाजिक र चर्चित ब्यक्तिहरुका बिषयका केहि भिडियो बनाइ रहे पनि राजनितिक बिषयमा भने भिडियो बनाउने छैन ।
जनवरि बाट मैले महिनाको कलाकार स्तम्भ पनि शुरु गरेको थिएँ । पहिलो महिना को कलाकार थिए राजेश हमाल । मैले कलाकारहरुसंग प्रत्यक्ष संपर्क नगर्ने हुनाले कलाकारहरुलाइ उनिहरु छानिएको औपचारिक जानकारि हुँदैन ।
अहिले सम्मको अनुभवमा, कुनै एक कलाकारको बारेमा सबै कुराको चर्चा गर्न एक महिना अति नै छोटो समय हो । राजेश हमालको बारेमा धेरै भिडियो बनाउन बाँकि नै छन । तेसैले, एक महिना भन्दा बढि लम्ब्याउनु पर्ने जस्तो लागेको छ ।
This entry was posted in आनन्दका १० कुरा and tagged youtube. Bookmark the permalink.
← नेपाल बन्ने होइन, बच्ने हो कि होइन – ज्ञानेन्द्रको चिन्ताका ४ प्रमुख बुँदाहरु
दरबार हत्याकान्डबारे पारस शाहको बयान (ऐतिहांसिक दस्तावेज) →